WINE 7.9 inosvitsa kuvandudzwa kwekutamba maWindows mazita paLinux | Linux Addicts
WINE 7.9 inosvitsa kuvandudzwa kwakawanda kwekutamba Windows mazita paLinux pakati peanopfuura mazana matatu shanduko svondo rino.
pablinux | 21/05/2022 12:54 | Linux software
Pashure v7.8 uye vanobata nguva senge wachi, avo vanogona kutora nguva yakati rebei kuburitsa nhau ndisu, WineHQ. yakakanda nezuro May 20 WAINI 7.9. Iyi ishanduro nyowani yekuvandudza iyo yavanoburitsa mavhiki maviri ega ega, kwete yakagadzikana vhezheni yekuisa chivimbo chese, asi haisi iyo nguva dzose yakashata yekuisa imwe yeaya kuburitswa. Ichokwadi kuti ivo havana iyo yakagadzikana label, asi ivo vanogadzirisawo zvinhu zvakawanda, uye chimwe chazvo chinogona kuvandudza zvakanyanya ruzivo rwemushandisi kana tichishandisa Windows zvirongwa pane mamwe mapuratifomu.
WineHQ inoti yakagadzirisa 35 bugs, asi yakaita shanduko inosvika mazana matatu nemakumi maviri nerimwe. 321 inowira mukati meavhareji, asi zvinhu zvingadai zvakachinja zvakanyanya dai pasina Rémi Bernon, uyo akachengeta makumi masere nevatatu vavo. Chiri kushamisa ndechekuti svondo rino WineHQ yakangoratidzira zviviri zvitsva. Ndiani anoziva, pamwe vakashaya chishuwo chekutsvaga chimwe chinhu chekusimbisa, asi isu tinogona kutaura kuti kune zvigamba zvinovandudza ruzivo rwekutamba mazita eWindows paLinux pasi peWINE.
Zvakanakisa zveWINE 7.9
Sezvatakataura, iyo yepamutemo inoratidzwa runyorwa ipfupi uye inoramba iri yekutanga basa reiyo macOS mutyairi PE kutendeuka uye akati wandei. gadziriso dzekutadza bvunzo paWindows. Kune izvi tinofanira kuwedzera chetatu, chenguva dzose, icho chinongoti "kugadzirisa kukanganisa kwakawanda".
WAINI 7.9 inowanikwa kubva Iyi link. Chikamu chenhau chisiri nhau ndechekuti, kwete kusiyanisa, chechipiri chinongedzo chakapihwa hachishande. Mu kurodha peji pane ruzivo rwekuti ungaisa sei iyi nedzimwe shanduro pane anoshanda masisitimu akadai saDebian neUbuntu, asi inogona zvakare kuiswa pa Android uye macOS.
Shanduro inotevera ichava a WINE 7.10 inouya June 3. Hatizive kuti vangani shanduko dzavachaunza mumavhiki maviri, asi dzinofanira kunge dziri mazana mashoma kana kupfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » WINE 7.9 inosvitsa kuvandudzwa kwakawanda kwekutamba Windows mazita paLinux pakati peanopfuura mazana matatu shanduko svondo rino.
HP ichatengesawo makomputa ane Pop!_OS akaiswa neanogara
Air Explorer uye Mhepo Cluster: maviri asingazivikanwe maapplication aunofanirwa kuziva nezvawo